Sii baro iswiidhishka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Baro iswiidhish / Sii baro iswiidhishka
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 13 7 2018
Meeshaan waxaad ka heli barnaamishyada (appyada) oo telefoonka mobiilka, filimyo iyo boggaga internetka oo adiga isticmaalikartid sidey barashada iswiidhishka kugu sii socoto.
Waxaa lagugu salaamay iiswiidhish 2 iyo 3
Dhanka Waxaa lagugu salaamay iswiidhish Hejsvenska 2 iyo 3 waxaa ku jirta luqad in yar ka sii adag iyo xitaa naxwaha. Ku tababaro kolba hal mawduuc oo ah habka aad doonaysid inay u kala horeeyaan. ​Waxaad app-kan ku soo dejisan kartaa moobilkaaga. Waxaad app-kan isticmaali kartaa adigoo aan haysan intarnat.
Hejsvenska 2 Hejsvenska 3
Learning Swedish waa aalad soo saarta Kuliyadda af-iswiidishka, oona loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo garanaayo af-ingiriisiga oona leh kartida barashada luqadaha.
Wararka iswiidhish fudud
Warka telefishinka SVT oo ku baxa iswiidhish fudud 8sidor.se ​Qoraal cad Raadiyaha Iswiidhan oo ku baxa iswiidhish fudud
Ku tababaro filim
Filimyadan waxaad ka baranaysaa kalmado iyo oraahyo caadi ah. Waad joojin kartaa oo dib ugu soo ceshan kartaa filimada haddii aad doonaysid. Waxaad heli kartaa filimkan oo qoraal leh haddii aad dhag ka siiso qoraalada hoose ee ku jira afar geeska dhinaca midigta ee gudaha filimkan.
Guri dabaq ku yaal
Filimmo kale oo af-iswiidishka lagu barto waxaad ka heleysa Weebka filimada ee anaga inoo gaarka ah.